UFC Fighter Night May 8 - Atụmatụ na amụma - Stake blog - jluis37.com
Dateline Vegas, anyị laghachi azụ na UFC apex maka ọgụ ọgụ na-atọ ụtọ abalị tupu anyị aga Houston maka UFC 262 izu na-abịa. A na-eleghara kaadị a anya n’ihi ịnwe isiokwu mbubreyo na-egbu oge, mana ọgụ ndị a na-agbawa n’agbanyeghị. Ka anyị banye n’ime!
Uche Ogbuagu Vs Alex Morono
Na ngalaba-isi ihe omume nke mgbede, anyị nwere a nsogbu n’etiti vetiran soja na egwuregwu na a siri ike na-ebili contender na Welterweight nkewa. Anyị nwere veti siri ike na Donald “Cowboy” Cerrone na-ewere Texan Alex siri ike “Onye Ukwu White” Morono.
Donald Cerrone na-achịkọta ihe ndekọ dịka okpu a ma ama ya. Cowboy na-ejide ndekọ mara mma maka mmeri kachasị na UFC Octagon, nnukwu aha dịka Edson Barboza, Eddie Alvarez, na Benson Henderson jikọtara maka mmeri 23 ya.
Cowboy abụwo ezigbo ọgụ na egwuregwu a ma nọrọ na Octagon yana ndị kachasị mma na azụmaahịa a. Cowboy na-edekwa ihe ndekọ maka njedebe kachasị na nkwụsịtụ na UFC, stats ndị a na-ekwu okwu ọma banyere ọgụ ọgụ ya na ikike ya.
Cerrone enweela ọghọm na-adịbeghị anya mana ọ bụ naanị onye elitist nke egwuregwu a na Conor Mcgregor, Justin Gaethje, na Anthony Pettis. Stepdị ala na asọmpi n’izu a nwere ike inyere Cerrone aka ịlaghachi na kọlụm mmeri.
Alex Morono, oké ọcha bụ ihe siri ike contender na ugbua stacked UFC Welterweight nkewa. A nabatara Morono mgbe ya na Anthony Pettis kesara Octagon ahụ mgbe o meriri 4 site na ọgụ ise ya. Morono nyere onye mmeri mbụ ahụ egwuregwu siri ike mana o nweghị isi na akara onye ọka ikpe.
Onye isi na-eti egwu, Morono bụ eriri ojii na taekwondo ma na-ele anya iji meziwanye egwuregwu ala ya na azụ nke eriri ojii mbụ ya na BJJ. Morono nwere ike ibili ma tie ihe kacha mma na azụmaahịa ma merie Cowboy na-eme ka nwa okorobịa ahụ bụrụ ezigbo okwu.
Egwuregwu a nwere ike ile anya dị ka onye na-egbu ihe na-agba egwu, mana Cowboy na ndị na-emegide ya na-alụ ọgụ maka ọtụtụ ọgụ ya. Morono na-achọ imeziwanye ọgụ ya, nke a nwere ike bụrụ ọgụ na-atọ ọchị nke ọma a na-agba iji kirie. Ha abụọ siri ike na nke a nwere ike ịpị akara akara onye ọka ikpe, mana onye welitere aka ya? Ka anyị chọpụta n’izu ụka a.
Anyị na-eche na Morono ga-enwe nnukwu uru yana ọgụ ọ bụla na – amalite na ụkwụ, ọ ga – ele anya idobe anya ya ma mebie owjọ na mpụga. Ebe, Cowboy ga-eleba anya na ntanetị, jiri ọmarịcha egwu ya dị elu wee gbaa mgba Morono. Nke a ga-abụ ọgụ na-akpali akpali; Fans na-enwe obi abụọ banyere Cerrone n’ihi ọghọm ọ na-adịbeghị anya mana ọ bụ naanị ndị kachasị mma na azụmaahịa ahụ.
Ebe Morono emebeghị nnukwu aha, anyị chere na nke a na-enye nnukwu ndị ọgụ abụọ a ohere dị ukwuu. Nke a nwere ike ịbụ ọgụ dị nso, mana n’ikpeazụ, anyị chere na Morono bụ ezigbo egwuregwu ebe a ma anyị na ndị na-eto eto nọ n’okpuru ebe a ga-arụ ọrụ ahụ.
Amụma – Alex Morono site na Mkpebi. Nsogbu Osisi – 3.95 (Nsogbu nwere ike ịgbanwe)
Anyị nwere nnukwu mbubreyo nnọchi isi ihe omume na aka anyị; nke a nwere ike ịbụ ọgụ dị mkpa iji chọpụta onye na-esote onye mmeri na nkewa nke Strawweight Women’s. N’ime isi ihe omume, anyị nwere onye mgba siri ike n’ọkwa 6 Marina Rodriguez na-ewere ọkwa ọkachamara karate 9 Michelle Waterson.
Marina Rodriguez bụ otu n’ime atụmanya nwanyị kachasị njọ na ndị UFC, ọ banyere na Octagon na ndekọ 10-0 na-akụda onye iro ya na Dana White’s Contender Series. N’ịji ike ya na egwuregwu ya egwu egwu, Marina gara 4-ọgụ na-enweghị mmeri megide ndị agha ochie siri ike ruo mgbe ọ gafere ụzọ mbụ UFC Strawweight onye mmeri Carla Esparza. Marina weghaara ọrụ mbụ ya site na mkpebi nkewa na ọgụ dị oke ọgụ megide onye mmeri mbụ.
Marina abụghị onye na-ala azụ, ọ nwere ọlaghachi na 2021 wee kụtuo otu kpakpando ibe ya na-eto na Amanda Ribas. Rodriguez egosila na ọ na-adịgide adịgide, sie ike, na ọ nwere ike ịbụ ezigbo nsogbu maka nkewa a.
Michelle Waterson anọwo na ndị UFC kemgbe 2015 ma chee ihu na Strawweight kacha mma na ndepụta UFC. Waterson agbadababeghị ọgụ na ọgụ siri ike, ọ na-egosipụtakarị n’abalị ọgụ wee gosipụta ikike ya na azụ nke 67% -win ọnụego.
Isi onye egwu nke nwere eriri ojii na Karate ma na-etu ọnụ egwuregwu siri ike na ntinye ọrụ 9 iji kwado ya. Waterson bụ onye na-ekwekọghị n’okike na onye mgba siri ike; nkà ya jikọtara maka egwuregwu siri ike maka onye ọ bụla na ndepụta UFC. Nya ike mgbe ya isi ihe omume 5 gburugburu nkewa mkpebi merie Angela Hill afọ gara aga, Waterson gosiri na ọ bụghị onye ọbịa na-aga 5 ike agba.
Nke a bụ kpochapụwo fan-mmasị striker vs striker matchup, na ọ ga-abụ a oké agha n’etiti eti si dị iche iche ntọala. Marina bụ onye na-eti Muay Thai ọkpọ egwu na Waterson onye ọgụ karat dị arọ.
Marina bụ onye kacha sie ike n’etiti ha abụọ ga – eleba anya na ọ ga – etinye okpomọkụ n’ime ọkpọ ya wee mebie Waterson n’oge. Angela Hill jisiri ike mebie Waterson na mbido 5-gburugburu ha, mana Waterson gosipụtara ike ya wee were ya banye na mmiri miri emi wee bulie aka ya site na mkpebi nkewa.
Marina gosipụtara na ọ naghị agbachitere agbachitere Esparza, mana o gosipụtara na anyị ezighi ezi site na ịkụpụ otu n’ime ndị na-ese okwu na nkewa na Ribas. Anyị na-adabere n’ebe ọkacha mmasị na Marina na isi ihe omume a, ọ dị ka onye agha kachasị elu. Marina nwere ike iburu ọgụ a n’ime mmiri miri emi ma ọ bụ ọbụlagodi na ọ ga-agwụcha ebe a, ọ dị aghụghọ ịhọrọ usoro ebe a mana n’ikpeazụ na-elele nsogbu anyị hụrụ uru na njedebe ebe a.
Amụma- Marina Rodriguez nke Knockout. Nsogbu Osisi- 5.20 (Nsogbu bụ isiokwu ịgbanwe).
Enwetaghị ọgụ ndị a dị ịtụnanya naanị na UFC Fight Pass https://ufcfightpass.com/ wee nweta nsogbu UFC kacha mma na Stake.com https://stake.com/sports/mma/ufc/ufc-fight-night-sandhagen- vs-dillashaw / Featured